नेपाली क्रिकेट: आज यूएईमा खेल्दैछ, तर के उच्च प्रदर्शन गरिरहन सम्भव छ - BBC News नेपाली
नेपाली क्रिकेट: आज यूएईमा खेल्दैछ, तर के उच्च प्रदर्शन गरिरहन सम्भव छ
उज्ज्वल आचार्य बीबीसी नेपाली सेवा
तस्वीर कपीराइट COURTESY: Raman Shiwakoti
नेपालले छोटै समयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा लामो फड्को मारेको छ। एक दशकभित्र डिभिजन पाँचदेखि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडीआईसम्मको यात्रा निकै रोमाञ्चक रह्यो।
सन् २०१८ को मार्चमा ओडीआई खेल्ने मान्यता प्राप्त गरेपछि खेलेका दुई शृङ्खलामध्ये नेपालले नेदर्ल्यान्ड्ससँग बराबरी र यूएईसँग जित हात पार्‍यो। यसै साता टुङ्गिएको यूएईसँगको २-१ को शृङ्खला विजयले नेपाललाई नयाँ उत्साह दिएको छ।
नेपाली खेलाडीहरू विशेष रूपमा रोहित पौडेल, सोमपाल कामी, सन्दीप लामिछाने र कप्तान पारस खड्काको व्यक्तिगत प्रदर्शन भव्य थियो। त्यही प्रदर्शन र सामूहिक प्रयासका कारण नेपाल पहिलो शृङ्खला जित्न सफल भयो।
बिहीवारदेखि नेपालले यूएईसँग तीन खेलको टी-ट्वेन्टी शृङ्खला खेल्दैछ। नेपाली क्रिकेट समर्थकहरूको आशा फेरि पनि टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर जित्छ भन्ने नै छ।
तर के नेपालले निरन्तर राम्रो प्रदर्शन गरिरहन सक्छ?
नेपाल क्रिकेट सङ्घ सन् २०१६ एप्रिलदेखि निलम्बित छ। नेपाली क्रिकेटको जिम्मेवारी बोकेको निकायको नेतृत्व विवादका कारण अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आईसीसीले निलम्बनको निर्णय गरेको हो।
नेपाली क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई आईसीसीले नै व्यवस्थापन गरिरहेको छ। तर स्थानीय स्तरमा क्रिकेट गतिविधि शून्यप्राय: छ।
निजी प्रयासमा केही व्यावसायिक टी-ट्वेन्टी प्रतियोगिताहरू मात्रै आयोजना गरिएका छन्। खेलाडीहरू, पूर्व खेलाडीहरू र केही क्रिकेटप्रेमीहरूको लगनशिलताले क्रिकेटलाई केही जोगाएको देखिन्छ।
न घरेलु प्रतियोगिता छ, न नयाँ प्रतिभा पहिचान र प्रदर्शनका लागि यथेष्ट मौका छ, न नेपाली क्रिकेटलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने निकाय छ। यस्तो परिस्थिति हुँदा पनि निर्णायक खेलहरू जितेर सफलता हासिल गरिरहेको छ।
कसरी जित्छ नेपाल?
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा जित्नुका दुई कारण छन्।
पहिलो, नेपाली खेलाडीहरू देशका लागि मैदानमा उत्रिँदा क्रिकेट खेल्न मात्रै होइन, देशका नाम गौरव बढाउनेबारे पनि सोच्छन्। उनीहरूमा जितको भोक हुन्छ। त्यसबाट टोलीले बलियो ऊर्जा र प्रतिबद्धता पाउँछ।
खेल मैदानमा भावनाको ठूलो महत्त्व नहोला। तर खेलाडीहरूको भावनात्मक ऊर्जाकै कारण यी सफलताका कथाहरू कोरिएका छन्। यसकै कारण अन्तिमसम्म नेपाली खेलाडीहरू हार मान्न रुचाउँदैनन्।
नेपाली समर्थकहरूको उपस्थिति, आशा र समर्थनले पनि उनीहरूमा थप ऊर्जा र प्रेरणा थपिदिन्छ।
दोस्रो, नेपाली क्रिकेटमा निर्माण भएको जग हो।
नेपाली क्रिकेटको जग भनेको खेलाडीहरूमा भएको सीप र तीमध्ये धेरै खेलाडीहरूले त्यो सीपलाई युवासम्म पुर्‍याइर निर्माण गरेको खेलाडीको सङ्ख्या हो।
कप्तान खड्का, उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल, र वसन्त रेग्मीले क्रिकेट खेल्न थालेको लामो समय भइसकेको छ।
राजु खड्का वा शक्ति गौचन वा विनोद दास वा एलबी क्षेत्रीजस्ता भूतपूर्व खेलाडीहरूले तालिम केन्द्रहरू स्थापना गरेर वा अन्य माध्यमले आफ्नो सीपपलाई युवामा लगानी गरेका छन्।
यूएईसँगको जितमा नेपालका युवा र अनुभवी खेलाडीहरू उत्साह र अनुभव दुवै प्रयोग भयो।
नेपाली क्रिकेटका चुनौती दशकौँदेखि ज्यूँका त्यूँ छ।
सन् १९९८ मा नेपालले पहिलो पटक एसीसी ट्रफी आयोजना गरेदेखि का समस्या जस्ताका तस्तै छन्।
हत्केलाका पाँच औँलामा गन्न सकिनेगरी ती क्रिकेट पूर्वाधार, बलियो घरेलु क्रिकेट संरचना, व्यावसायिकता, क्रिकेटको बजारीकरण र क्रिकेट विकासको योजना हुन्।
क्रिकेटका लागि पूर्वाधारहरू यथेष्ट छैनन्, भएकाको स्तरोन्नति भएको छैन। त्यसैले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता वा शृङ्खला आयोजना गर्न सीमितता छ।
खेलाडीहरूले प्रशस्त अभ्यास गर्न पाउनेगरी र नयाँ खेलाडीहरूले आफूलाई प्रमाणित गर्नेगरी प्रतियोगिता हुँदैनन्।
नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिन नेकपा र कांग्रेस साथसाथ
नेपालका लागि कम्तीमा एकदिवसीय र बहुदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता र खेलाडीले कम्तीमा वर्षमा ३०-३५ दिन प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट खेल्न पाउनेगरी वर्षभरि क्रिकेट हुने अवस्था चाहिन्छ।
राष्ट्रिय टोलीका खेलाडीहरूले ढिलै भए पनि तलब पाउछँन्। तर जबसम्म घरेलु क्रिकेटमा नियमित खेल्ने अधिकांश खेलाडीहरूले जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेगरी क्रिकेटबाट कमाउँदैनन् तबसम्म क्रिकेटको दीर्घकालीन विकास हुँदैन।
व्यावसायिका खेलाडीका लागि मात्रै होइन, खेल र खेलको निकायमा पनि चाहिन्छ।
त्यत्रो खेलाडी धान्ने पैसा कहाँबाट आउँछ त? यसका लागि क्रिकेटको बजारीकरण गर्नुपर्छ।
सहयोग वा व्यापारिक लाभका लागि नेपाली क्रिकेटमा लगानी गर्न खोज्ने प्रायोजकहरूको कमी छैन।
कमी छ त क्रिकेट विकासको योजना र अग्रगामी सोचको।
क्रिकेट सङ्घले निलम्बन नहुँदै त क्रिकेट विकासको योजनाहरूतर्फ कहिल्यै ध्यान दिएन, निलम्बित अवस्थामा त्यो हुने कुरै भएन।
तर महत्वाकाङ्क्षी सोच र तदनुरूप योजना बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने नेपाली क्रिकेटको प्रदर्शन दीर्घकालीन बन्न सक्छ।
कप्तानको बोलीमा लुकेको कुरा
कप्तान खड्काले यूएईसँगको शृङ्खलामा नेपाल विजयी भएपछि भने,"परिणाम हाम्रो पक्षमा आयो तर हामी अझै धैर्यवान् हुनुपर्छ।"
उनले अप्रत्यक्ष रूपमा भन्न खोजेको कुरा हो - नतिजा सधैँ हाम्रो पक्षमा आउँदैन र हामीले अझै धेरै गर्न बाँकी छ।
नेपाल क्रिकेटमा ठूलो सम्भावना बोकेको राष्ट्र हो। तर सन् १९९६ देखि देखिएको त्यो सम्भावना र प्रतिभालाई न्याय भएको छैन।
त्यो सम्भावना र प्रतिभालाई न्याय गर्ने भनेको खेलाडीले मात्रै होइन, राज्य र क्रिकेटका सरोकारवाला सबैले हो।
राज्यले क्रिकेटमा लगानी गर्नुपर्छ। अन्य सरोकारवालाले यसलाई व्यक्तिगत लाभ वा अहम्‌को विषयको रूपमा नलिई क्रिकेटको विकासका लागि त्याग र समर्पण गरेर एकजुट हुन सक्नुपर्छ।
अहिलेकै अवस्थामा नेपालले नियमित रूपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न गाह्रो छ।
राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा नयाँ 'सन्दीप' को उदय